I-mousse enhle kakhulu ye-chocolate emaminithini we-15 > Ukudla ngesifo sikashukela
Indlela: I-Homemade Chocolate Mousse
Sethula ukunaka kwakho iresiphi ye-dessert esheshayo.
Umndeni wakho uyohlala uthokozela ukuphathwa okunjalo. Imousse emnene emangazayo emane inyibilika emlonyeni wakho. Akunakwenzeka ukuthi ungamthandi. Ukupheka i-yummy enjalo kulula kakhulu futhi akuthathi isikhathi esiningi. Ngisho ne-novice hostess izokwazi ukubhekana nayo. Gcina iresiphi futhi ujabulele abathandekayo bakho nge-funky so.
Izinsizakalo - 2
Isikhathi sokupheka - 1 h 0 min
Phula ushokoledi ube yizicucu bese ubeka esitsheni esijulile. Uma une-microwave, gcwalisa ushokoledi ngo-ukhilimu bese ubeka isitsha kuwo ku-microwave imizuzu engu-1-2 kuze kube yilapho ushibilike ngokuphelele.
Uma kungenjalo, fudumeza izingcezu zikashokholethi kubhavu wamanzi uze unyibilike bese kuphela uthelela ukhilimu kuzo.
Hlanganisa ngobuningi isisindo sonke.
Faka isitsha sikashokoleti oncibilikisiwe kwenye indishi yamanzi eqhwa noma iqhwa bese uqala ukushaya nge-mixer ngejubane elikhulu, cishe imizuzu eyi-4-5.
Lapho isisindo seligqinsiwe kancane bese kuba yi-airy eningi, engeza isikhupha senkukhu kulo bese uqhubeka nokushaya cishe imizuzu emi-3-4. IMousse kufanele ikhule kahle - kuya ngekhwalithi yoshokoledi.
Uma i-mousse yakho ingagqinsi, ngakho-ke ungapheli amandla: thela i-10 g ye-gelatin ngamanzi ashisayo bese uyixube kahle, bese uyithululela ku-mousse bese ushaya yonke into futhi.
Ngemuva kwalokho uthele isisindo sikashokholethi esitsheni noma endishini bese ubeka emakhazeni. Esiqandisini, imousse ibanda cishe imizuzu engama-30, efrijini - imizuzu eyi-15.
Ngemuva kwesikhathi esinqunyiwe, susa i-dessert bese uyihlobisa ngo-ukhilimu ophehliwe, amajikijolo, izithelo namaqabunga mint amasha.
Khonza umoya opholile we-chocolate mousse etafuleni bese uthokozisa isipuni ngasinye salokhu kuphathwa ngobumnandi!
Kulabo abangayithandi i-gelatin noma ngasizathu esithile abakwazi ukuyisebenzisa, futhi isiphudingi asisho ukuqina lapho sikhaxabha, ungangeza elinye iprotheni kusuka kwiqanda elilodwa. Lokhu kuzokwenza ukuvumelana kube kukhulu, kepha kuhlanganiswe nezithako eziphambili, lokhu kuzovumela ukuthi uphudingi ube uthambile futhi ube nomoya.
Kungcono ukuthatha ukhilimu onamafutha amaningi, ngoba hhayi ukunambitheka kwe-milky kuphela, kepha futhi ukuvumelana kuncike kukho.
Bona ukuthi ungawakha kanjani ushukela omuhle waseFrance:
Okokuqala, sibamba ngesigamu isitsha se-ice cubes kusengaphambili.
Siphula ushokoledi ube yizicucu bese sidlulisela ku-stewpan. Bese uthele ushukela obunjiwe lapha bese uthela emanzini ne-cognac (isiraphu ye-maple).
Sifaka ukushisa okuphakathi futhi, okuvusa amandla, ukushisa. Lapho nje isisindo se-chocolate siba homogeneous, susa emlilweni. Into esemqoka lapha ukungashisi ushokoledi, ngaphandle kwalokho kuzokwembatha.
Sithatha izitsha ezimbili. Sibeka u-ice ezansi kwenye yazo bese sithela amanzi abandayo ukuze phansi kwesitsha sesibili kuthinte amanzi eqhwa.
Thela isigaxa sokhethi esidliwayo esitsheni sesibili bese usifaka kubhavu le-ice. Siqala ukushaya nge-mixer. Kumele kuqinisekiswe ukuthi i-mousse ayisiqinisi kakhulu, ngoba kuzoba nzima ukuyidlulisela ezitsheni. Letha kubuningi obuphakathi bese ulala phezu kwezitsha.
Emva kwalokho, ungayisebenzela masinyane, ihlohlwe ngo-ayisikhilimu no-ushokoledi osikiwe.
Ungase futhi uthande i-mousse emnandi ye-lime, iresiphi ongayithola kuwebhusayithi yethu ethi "Imibono Yephutha".
Chofoza okuthi "Like" bese uthola okuthunyelwe okuhle kakhulu ku-Facebook ↓
Iresiphi "I-mousse ye-chocolate esheshayo"
Bengingagcini nje ngamanzi, njengasekuqaleni iresiphi, kepha ngenza ikhofi. Uyelule walinganisa ngo-240 ml. Kungezwe utshwala kuyo (ngine-tinilla eyenziwe nge-vanilla-orange).
Phula ushokolethi ube yizicucu, uthele ushukela we-Demerara oshukela ku-Mistral we-TM
Thela ikhofi notshwala bese ubeka isoso ekushiseni okuphakathi. Kuyadingeka ukuvusa ingxube ye-chocolate ngaso sonke isikhathi kuze kube yilapho ushokoledi noshukela usuqediwe. Kepha awukwazi ukweqisa ngokweqile, khumbula lokhu, uma kungenjalo, ushokoledi ungavunguza.
Lapho ushokolethi usuchithile, uyoba njengoshukela - kepha akusabi okwesabisayo. Susa ipani esitofu bese ubeka epanini enkulu enangaphambi kokuphekwe, kungaba ngamanzi eqhwa noma iqhwa, ukuze phansi kwepani ngoshokolethi kuthinte ubuso bawo.
Siqala ukushaya isisindo sikashokholethi. Imizuzu emihlanu akukho okuzokwenzeka, kodwa ngomzuzu we-6-7 kuzocaca kahle ukuthi isisindo siqala ukuqina.
Uma uzodlulisa isisindo sibe ingilazi ezihlukaniswe ngesipuni, bese kuthi ngomzuzu wesishiyagalombili, yeka ukuswayiza i-whisk futhi ngokushesha udlulise i-mousse. Lapho-ke yena ngokwakhe uyoqina ngokuphelele.
Ithiphu: Sebenzisa isitsha esijulile ukushaya isiswebhu, ngaphandle kwalokho izindonga zakho zizobe zikashokolethini. Ukuzwa lokhu, ngithele le ngxube ye-chocolate endishini ejulile.
Futhi uma ufuna ukuhlobisa umousse kahle, uwushiya esikhwameni sikhekhe esinezimbali, lapho-ke udinga ukushaya imizuzu eyi-9 kuya kwayi-10. Bese uyifaka esikhwameni sikhekhe. Konke kuncike ekutheni i-mousse yakho iqala ukuphola ngokushesha futhi ibe ukuqina.
Ungahlobisa i-mousse nganoma yini: i-pastry topping, amantongomane kanye no-ayisikhilimu.
I-P.S. Isisindo sikashokholeti singase singabi lukhuni isikhathi eside, ngcono lapho selepholile, inqubo yokuqina izohamba ngokushesha. Ngicabanga (!) Ukuthi ungashiya imizuzu emihlanu yokuqala yokushaywa, futhi ngokumane nje uvuse, upholise isisindo sokhethi ngokufaka emanzini e-ice noma ukuwubeka eqhweni. Futhi kuphela ngemuva kokupholisa kancane, qhubeka ukushaya. Isivivinyo!
Iba nokuhle !!
Ngifuna ukunikeza le ndlela umngane wami othandekayo uMarina (Maryana_Z). Yena, njengami, musha kuP Porenrenok. Sahlangana ku-inthanethi futhi kancane kancane, ukuxhumana, saba abangane abaningi. Intombazane enomusa kakhulu futhi ewusizo. Sihleke sobabili futhi sikhale. Sabelana ngezinkinga zethu nenjabulo. Kuyivelakancane ukuthola umuntu osondelene nomoya empilweni yangempela, kepha i-Intanethi ihlanganisa abantu. futhi kanjalo kuyahlanganisa. Mhlawumbe ngoba yonke into isebangeni futhi akukho kungqubuzana? Noma mhlawumbe ngoba wahlangana nalowo muntu, kepha akazange ahlangane ngaphambili? Ngokuvamile, ngijabule kakhulu ukuthi ngandlela thile ngxhumana naye. Maroussia, ngifisela wena impilo enhle, impumelelo emizamweni yakho nenjabulo yabesifazane! Konke lokhu kukuwe.